XILDHIBAAN MAHAD MAXAMED SALAAD iyo fikirkiisa xaga Doowlada – MUDUGPOST
You are here: Home XILDHIBAAN MAHAD MAXAMED SALAAD iyo fikirkiisa xaga Doowlada
Posted on September 16, 2017 by MUDUGPOST | 0 Comments
Doowladu si eey u hesho nabad iyo horumar waa-laga maarmaan in eey leedahay kuwa adeeca doowlada iyo ku saxa qalad kasta eey doowladu gasho si eey ugu talaabsato horumar una ilaalsato midnimadeeda iyo sharafteeda.
“ Waxaa is ka cad in koox dad ah oo leh khibrad shakhsiyadeed oo kala duwan ay ka wanaagsan yihiin koox heeysta hal fikir oo isku mid ah ” sababtoo ah dadka kala fikirka duwan waxa la yimaadaan macluumaad cusub ooy ku xaliyaan qilaaf soo food saara .
Hadaba waxaa Doowlada Federaalku soomaray bishaan xaalada adag markii si qalad ah loogu dhibay Muwaadin Soomaliyeed wadanka Itoobiya. Arintaas ayaa waxa eey keentay in xildhibaanadu ku kala fikir duwanaadaan.
Xildhaabo qaar ayaa tageeray fikirka Doowladu ku dhaqaaqday , halka qaarna eey ku tilmaameen in eey aheeyd mid qalad iyo sharaf dhac ku ah madaxbanaanida Soomaliya.
Hadaba waxaa idaacadaha ka dhex muuqday Xildhibaan da’a yar ahna aqoonyahan ,kana mid ah Baarlamaanka Doowlada federaalka Soomaliya waa Mahad Maxamed Salaad.
Markii hore Dad badan oo soomaliyeed ayaa u arkayay Xildhibaanka Mahad Maxamed Salaad in uu carqalad ku yahay Doowlada balse markii danbe ayaa waxaa cadaatay in Xildhibaanku uu yahay shaqsiga kaliya ee sixi kara Doowlada Soomaliya qaladkeeda si eey u noqoto Doowlada Tayo leh taasoo hesha sharaf iyo qadarin, shacabkeeduna uu siiyo kalsooni eey ku gudan karto waajibaadka saran, sidoo kalena wadamada caalimiguna eey u arkaan Soomaliya wadan madax-banaan , kuna shaqeeya Shuruucda Caalamiga iyo Dhoowrista xuquuqda muwadinaka Soomaliyeed iyo Doowlad Dhoowrta Xuquuqda Qaxootinimo.
Xaqiiqdu waxay tahay haddii aad rabto inaad dhisto heeyado doowli ah oo leh karti, waxaad u baahan tahay dad leh aragtiyo kala duwan.
Kala duwanaanshaha ayaa kobciya hal-abuurka iyo horumarka , sahalka maamul tayo leh .
Fikradaah kala Duwan ayaa dhiirigeliya raadinta xogta iyo aragtida cusub, taasoo horseedi karta go’aan qaadasho fiican iyo xalinta dhibaatada soo food saarta Doowlada .
Hadaba Xildhibaan Mahad Maxamed Salad ayaa jecel in Soomalia iyo Itoobiya eey noqdaan laba dal oo deris ah isna qadariya, yeeshana xiriir ku dhisan is qadarin balse diidan in Itoobiya eey ula dhaqanto Soomaliya si adoonsi iyo in Doowlada Federaalku eey ka leexato Dastuurka sharciga iyo kan caalamiga ee lagu saxiixay Jineefa .
Fikirka Xildhibanaka Mahad Maxamed salad ayaa ku dhisan sida eey aaminsan yhihiin Siyaasiinta wadamada Africa raga iyo haweenka aqoonta leh jecelna in Africa eey is-qadarido , kana fogaadaan ,faragelinta dhexdooda taasoo horseeda is-aaminid iyo wax-wada qabsi.
Soomaliya waa dal-burburay, dadkiisuna is naceen ,balse taas waxaa uga sii daray faragelinta shisheeye. Hadaba in la saxo Doowlada federaalka waa wanaag iyo horumar balse in qalad lagu taageero waxa eey u keeni in eey Doowladu naga wada burburto.
Hadaba yaan la isku nicin fikir kala duwanaashada ku dhisan sixida.
Aan siino Doowlada federaalka fikir wanaagsan eey ku horumarto.